सय भन्दा बढीको क्यारिकेचर गर्ने दिनेश भन्छन्-राष्ट्रपतिको क्यारिकेचर धेरैले मनपराउनु भएको छ – Everest Times News
सय भन्दा बढीको क्यारिकेचर गर्ने दिनेश भन्छन्-राष्ट्रपतिको क्यारिकेचर धेरैले मनपराउनु भएको छ
सडक नाटकबाट कला यात्रा थालेका दिनेश काफ्ले अहिले धेरैभन्दा धेरै चर्चित व्यक्तिहरुको आवाज दुरुस्तै निकालेका कारण चर्चामा छन् । यही चर्चाका कारण उनलाई स्टेज कार्यक्रममा भ्याईनभ्याई छ ।
माग्ने बुढा होस या तक्मे बुढा, धूर्मुस होस या जिक्री उनी एक्लै यी सबै स्वरहरु सुनाएर दर्शकलाई चकित पार्न सक्छन्, मनोरञ्जन प्रदान गर्न सक्छन् । त्यसैले पनि अहिले उनको माग बढिरहेको छ । साउनयता फेसबुक र युट्युबमा उनले प्रस्तुति गरेका भिडियो भाइरल भएसँगै उनको कलाकारिताले यो फड्को मारेको हो ।
भिडियो भाइरल भएयता देशका दुई दर्जन जिल्लामा स्टेज कार्यक्रम लिएर पुगिसकेका छन् दिनेश । दक्षिण कोरियामा आफ्नो प्रस्तुति दिन भ्याइसकेका दिनेशलाई कार्यक्रमका लागि पुस माघसम्म पनि अहिले नै एग्रिमेन्ट गर्नेहरु आइरहेका छन् । डमी कलाकारका रुपमा पनि उनको माग उत्तिकै बढिरहेको छ । त्यसैले उनले ‘क्यारिकेचर किङ’को उपाधि पनि पाइसकेका छन् । सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिकाका उनै दिनेश काफ्ले कार्यक्रमकै मेसोमा विभिन्न ठाउँ पुगिरहेका छन् । उनै काफ्लेसँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीः
बुटवलबाट काठमाडौं कहिले फर्किदैं हुनुहुन्छ ?
केही दिन यतै रहन्छु । यहाँबाट स्टेज कार्यक्रमकै लागि गुल्मी पुग्नुछ । त्यसपछि रुपन्देहीको सैनामैना पुग्नुछ । त्यहाँबाट कपिलवस्तुको कार्यक्र भ्याएर काठमाडौं फर्कन्छु । मंसिरको पहिलो हप्तामा त काठमाडौं पुग्छु ।
चुनावी ह्वातै लागेको छ, चुनावी कार्यक्रममा जानुभएको हो ?
विशुद्ध मनोरञ्जनमुलक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिदैछु । चुनावी कार्यक्रममा निम्तो आएको थियो । तर, पार्टीको झन्डामुनि बसेर हसाउँन मनले मानेन । कुनै पार्टीको ट्याग लगाएर हिड्ने मन आएन ।
कति कलाकार पार्टीका गीत गाउँदै चर्चित भएका छन्, कति त पार्टी नै प्रवेश गरिरहेका छन् नि ?
हो त्यस्तो भइरहेको छ । तर मलाई स्वतन्त्र भएर प्रस्तुति दिन मन छ । पार्टीमा लागेर पनि केही राम्रो भएको त म देख्दिनँ । पार्टीले त प्रयोग गर्छन् । अनि छाडिदिन्छन् । त्यसैले हामी कलाकार भएको नाताले राष्ट्रको साझा भएर हिड्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
अहिले त सबै ठाउँमा चुनावी कार्यक्रम भइरहेका छन्, यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुदाँ खाली बस्नुपर्ने समस्या हुदैन ?
काठमाडौं आएपछि टेलिभिजन शोका लागि केही दिन सुटिङ छ । बीचमा चुनावले गर्दा केही दिन आराम पनि गर्न मिल्छ । चुनावी कार्यक्रममा भाग नलिए पनि खासै खाली बस्नुपर्ने अवस्था छैन । माघसम्मको लागि एग्रिमेन्ट आइसकेको छ ।
छोटो समयमै चर्चित हुनुभयो, कसरी सम्भव भयो जस्तो लाग्छ ?
कलाकारितामा लागेको त धेरै भइसक्यो । शैली थिएटरमा नाटक सिकेर सडक नाटक गर्न थालेको नै ७–८ वर्ष भइसक्यो होला । यसपछि रेडियो अडियोमा काम गरे । कलाकारितामा निरन्तरता दिए । गएको साउनबाट विभिन्न मिडियामार्फत अनलाइन, फेसबुक, युट्युबमा आएपछि मलाई मनपराएर धेरै दर्शकहरुले सेयर गरिदिनुभयो । हेरिदिनुभयो । र, मलाई निम्तो दिन थाल्नुभयो । त्यसपछि भने मलाई अहिले कार्यक्रममा पनि जान भ्याईनभ्याई हुन थालेको छ ।
तपाईं सयजनाको क्यारिकेचर गर्छु भन्नुहुन्छ, सयजनाको सक्नेले संसारका सबै मान्छेको गर्न सक्नुहुन्छ होला नि ?
यो त धेरै गाह्रो कुरा रहेछ । अहिले सयभन्दा केही बढीको गर्दैछु । एकजनाको मिमिक्री गर्न उसको धेरै भिडियो, अडियो सुन्नुपर्छ हेर्नुपर्छ । त्यसैले सबैको गर्न सक्ने त सम्भावनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो । तर, म संसारका धेरै भाषाहरुमा क्यारिकेचर गरेर गिनिज वल्र्ड रेकर्ड भने राख्ने सपना बोकेरै हिडिरहेको छु । डोनाल्ड ट्रम्प, ओबामा, सि जिनपिङ, नरेन्द्र मोदीको मिमिक्री गर्नका लागि अध्ययन गरिरहेको छु । हेरौं कतिसम्म सकिने रहेछ । यसका साथै अमेरिकन गड ट्यालेन्ट शोमा पुगेर अन्तराष्ट्रिय दर्शकलाई हसाउँने सपना पनि छ । यो शोमा पुग्ने पहिलो नेपाली भनेर चिनिन चाहन्छु ।
स्टेजमा तपाईंको बढीमात्रमा रुचाइने प्रस्तुति के हो ?
अहिले मोटुपात्लु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिमिक्री धेरैले मनपराइ दिनुभएको छ । मोटुपात्लु युवा पुस्ता र बालबालिकाले मन पराउनुहुन्छ भने राष्ट्रपतिको भने पहिलोपटक चर्चित महिलाको मिमिक्री भनेर धेरैले मन पराइदिनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको ड्रेस अपमा पनि प्रस्तुति दिनुभएको छ कि ?
त्यस्तो चै अहिलेसम्म गरेको छैन । ज्यान पनि सानो भएकोले ड्रेस अपमा गर्ने आँट गरेको छैन । अहिलेसम्म जतिको क्यारिकेचर गरेको छु सबैको स्वरबाटमात्रै गरेको छु ।
हास्य क्षेत्रमा धेरैको उपनाम छन्, तपाईंको उपनाम छैन नि ?
उपनाम राखेर ड्रेस अप राखेर अभिनय गर्ने धेरै हुनुहुन्छ । त्यसैले मैले कुनै उपनाम नराखी आफ्नै नामबाट चिनिने प्रयास गर्दैछु ।